Dani Ceballos oo aysan u badnayn inuu sii joogo kooxda Arsenal… (Maxaa jira?) – Gool FM
Dani Ceballos oo aysan u badnayn inuu sii joogo kooxda Arsenal… (Maxaa jira?)
(London) 06 Sebt 2019. Arsenal ayaa lagu soo waramayaa inay u badan tahay inaysan helin fursad ay kula soo saxiixato heshiis joogta ah xiddiga khadka dhexe ee Real Madrid Dani Ceballos dhammaadka xilli ciyaareedkan 2019-20.
23-sano jirkaan ayaa ku qaadan doona inta ka dhimman xilli ciyaareedka amaah uu kula joogo kooxda Gunners kaddib markii uu yimid garoonka Emirates dhammaadka dabayaaqada bishii July.
Xiddiga heerka caalami ee dalka Spain ayaa loo diiwaan geliyay labo caawin oo Premier League ah tan iyo bilawgii xilli ciyaareedkan taasoo lagu tilmaamay bilow wanaagsan, isagoo ka soo muuqday afarta kulan ee ay ciyaartay kooxda Arsenal.
Si kastaba ha ahaatee, sida ay sheegayaan wararka ka soo baxaya Spain, Ceballos ayay u badan tahay inuusan kusii nagaan doonin kooxda ka dhisan Ingiriiska dhammaadka xilli ciyaareedka, iyadoo madaxweynaha Los Blancos ee Florentino Perez uu doonayo ciyaaryahanka khadka dhexe inuu ku soo laabto garoonka Bernabeu xilli ciyaareedka soo socda.
Ceballos ayaa dhaliyay shan gool 56 kulan oo uu u saftay Madrid tan iyo markii uu kaga soo biiray Real Betis sanadkii 2017, waxaana loo arkaa mid ka mid ah xiddigaha mustaqbalka ku leh kubadda cagta.
Yeelkeede, inkastoo kooxda Real Madrid ay ku guul darreysatay inay la soo saxiixato bedel suurtagal ah oo ku saabsan Paul Pogba ama Bruno Fernandes waxaan ay taasi meesha ka saareysaa in Arsenal ay si sahlan kula saxiixan karto Ceballos waliba si joogta ah inkastoo ay wax waliba dhici karaan.
Paris Saint-Germain oo iska diiday dalab ku aaddan Neymar Jr oo ay ka heshay kooxda Juventus